Petrozavodsk State University - Study na Russia. EducationBro
Petrozavodsk State University Nkọwa
tọrọ ntọala : 1940
Echefukwala atụle Petrozavodsk State University
Idebanye aha na Petrozavodsk State University
University PetrSU e hiwere na 1940 dị ka Finnish-Karelian University ma nweta ya ugbu aha na 1956. N'akụkụ ya nile 75 afọ akụkọ ihe mere PetrSU aghọwo ndị kasị ibu mahadum na North-European akụkụ nke Russia na-azụ ihe karịrị 60000 ụmụ akwụkwọ. Ọ ọma na-agwakọta omenala nke oge gboo mmụta na isi sayensị na-achọpụta ihe ọhụrụ mkpebi ke ubi nke elu-eji nkà mmụta sayensị na mmepe.
PetrSU nwere ọtụtụ ọwọrọiso Alumni, gụnyere eminent ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ede abụ uri. Ọ na-ahụ mgbe nile enịm n'etiti ndị kasị mma mahadum nke Russia dị ka dị iche iche rankings (GreenMetric World University ọkwa - 2nd n'etiti 100 kasị mma mahadum na Russia; «Interfax» na «Ekho Moskvi» nọọrọ onwe ha na mba fim na internalization Atiya - 3rd ebe, wdg)
The mahadum enyene 8 ụlọ n'obodo ahụ dum na-arụ ọrụ a Botanic ubi, a igwu mmiri «Onego», ọtụtụ laboratories na a na-ekwusara ụlọ. Ya n'ọbá akwụkwọ esetịpụ a ngụkọta nke gburugburu 1.4 nde akwụkwọ. PetrSU dị na Petrozavodsk, ma ọ na-nwere a n'alaka ụlọ ọrụ dị na Apatity, obodo ga-Murmansk region.
Taa karịa 14800 ụmụ akwụkwọ ịga ọmụmụ dị iche iche Undergraduate, gụsịrị akwụkwọ na post-gụsịrị akwụkwọ na mmemme. Ha na-akụzi ihe karịrị otu puku professors, na nsonye 550 PhDs, 145 Dọkịta nke Science, 26 òtù nke steti academies nke sayensị.
The mahadum na-mejupụtara 80 ngalaba, 9 ikike iche, 7 izi institutes na 8 nnyocha institutes.
Onyinye OBODO NA mpaghara
The mahadum na-arụ-arụsi ọrụ ike na-eme ka elu-akụziri ndị mmadụ nweta ihe ka ndi bi na outland distrikti nke Karelia na steeti ndị dị nso. Ọ bụla district e kenyere ya a ngalaba ma ọ bụ na ulo akwukwo na ụmụ akwụkwọ si n'obere obodo ma ọ bụ obodo nta nwere ike ide maka onye were gị n'ọrụ-nkwado mmụta. Ụmụ akwụkwọ si Petrozavodsk ụlọ akwụkwọ, lyceums na ụlọ mmega ahụ pụrụ ịga tupu mahadum ọzụzụ kpọmkwem ka ha ga-eme n'ọdịnihu ubi nke ọmụmụ.
PetrSU, so na-ahazi ma na-eduzi ndị n'Otu State Exam (Jiri), nke siworo isi ụdị ngụsị akwụkwọ ule n'ụlọ akwụkwọ na isi ụdị nke mbido ule na-eweta na mahadum na Russia ruo n'oge gara aga 10 afọ. The mahadum ụlọ Regional eji Center, nke n'ibu nnyocha na ya pụta na-enye online ndụmọdụ maka nkụzi na ụmụ akwụkwọ.
PetrSU bụ a ghọtara nnyocha center ke ubi nke mmemme, IT, plasma research, microelectronics, mgbakọ na mwepụ, physics, sayensị ọgwụ, bayoloji, akụkọ ihe mere eme, philology, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na sayensị, iwu, akụnụba, -ewu, oke ohia, agriculture. Karịrị 60 mpaghara, mba na mba uwa okwu na-enwe kwa afọ, n'elu 300 steti na onwe-kwụrụ ụgwọ ọrụ ke ubi nke sayensị na-akụziri na-rụrụ, na ọtụtụ nke monographies, Akwụkwọ na obere akwụkwọ na-ebipụta.
Ọnụ nke mba / mmekọahụ
N'ime afọ PetrSU anọwo nnọọ na-arụsi ọrụ ike na mba arena. Taa karịa 200 mba ụmụ akwụkwọ si USA, Europe, China na mba ndị ọzọ na-amụ na mahadum, na 10 professors si mba dị iche iche na-akụzi na PetrSU.
Enwere 6 nwe-mmemme na-asụ Bekee ulo oru na 2015: «Network Services na Systems», «Comparative Social Policy na Welfare», «Public Health», «Tourism Management», «Nordic Studies: asụsụ, Culture na History »na« Spintonics ». Undergraduate ụmụ akwụkwọ nwere ike na-ahọrọ a Bachelor si ma ọ bụ ọkachamara si ogo.
The mahadum nwere 87 arụsi ọrụ ike na mba nkwekọrịta na 27 mba (Finland, Sweden, Norway, France, Germany, Portugal, United Kingdom, United States of America, Canada, Belgium, Korea, mba nke Baltic region, wdg) na mba mgbanwe omume na-ulo oru na 20 si mba ọzọ na mahadum. 30 mba oru ngo na-enwe kwa afọ na ego nkwado nke dị iche iche mba ego, mmemme na òtù (US, EBRD, USAID, CRDF, IREX, DAAD, CIMO).
PetrSU International nkeji agụnye Institute of International Mmemme, EU Center ke Barents Region ke Russia, International Summer University, International Programming Specialist Training Center, PetrSU Metso Center, PetrSU Nokia Center na PetrSU Ponsse Center. Institute nke mba mmemme ụlọ Atlantic na Asia Cooperation Center, na European Union Information Center na International Education Center.
The mahadum akwado UNESCO, University nke Arctic, Joint-arụ ọrụ Group on Education na Research nke Barents Euro-Arctic Region, National Board on Education na Finland, International Association of Finno-Ugric Universities, Association of Open innovations FRUCT, Barents Peace Education Network.
Atọ Language Centers na mahadum inweta ohere agafe ndị na-esonụ asụsụ ule:
turf (Ule nke Russian dị ka asụsụ mba ọzọ)
TOEFL (Ule nke English dị ka asụsụ mba ọzọ)
Ibé akwụkwọ (Ule nke Legal English Nkà)
ACCOMODATION maka mba ụmụ akwụkwọ
International ụmụ akwụkwọ nwere ọtụtụ nnabata nhọrọ ịhọrọ site na, otu nke flat maka mgbazinye, hotel / ụlọ mbikọ ụlọ ma ọ bụ ibi na usu ezinụlọ. The kasị ewu ewu nhọrọ ezie bụ amụrụ obibi. PetrSU nwere 10 obibi ụlọ uri obodo. The mahadum adịghị nwere a isi campus, ma dị mfe iji ruo n'ebe ọ bụla obibi via ọha iga. All ụlọ nwere internet ohere, lounges na-amụ Ụlọ Nzukọ Alaeze na, gyms. Ha na-onwem na saa igwe na stoves.
Institute of Foreign Asụsụ
Institute of History, Ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Social Sciences
Institute of oke ohia, Engineering na Construction Sciences
Institute of Environmental Management na European North
Institute of Education na Phycology
Institute of Physical Education, Egwuregwu, na ihe Tourism
Karelian Regional Institute of Management, Economics na Iwu nke PetrSU (KRIMELTE)
Faculty of Mining na Geology
Faculty of Mathematics na Ozi Technologies
Faculty of Physics na Technology
Faculty of Ọmụmụ na Biology
N'ihi achikota ọrụ nke ngalaba na ndị ọzọ na mahadum ọrụ, na mmalite nke afọ ndị 1970 ikike nke Karelian-Finnish State University ghọrọ nnọọ ịrịba na Republic of Karelia dum edere akụkụ nke mba.
na 1973 Mikhail Shumilov ghọrọ ọhụrụ Rector nke mahadum. Na a PhD na History, ọ maara nke ọma n'ihi ya monographs banyere akụkọ ihe mere eme nke Karelia na European North.
na 1975 a ọhụrụ Department of Accounting meghere na University dị ka a akụkụ nke School of Mathematics na Physics. Isi ihe mere maka mmalite nke a ngalaba bụ enweghị ruru eru accountants na economists na Karelia. Klas nke mbụ nke ajụjụ ụmụ akwụkwọ gụchara akwụkwọ na 1979 na gụnyere 52 eto eto ọkachamara. na 1980 na School of Economics e meghere. Ọ gụnyere atọ ngalaba: na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na aku na uba, ajụjụ na ụba na-arụ ọrụ, na sectorial aku na uba. The mbụ diin nke School bụ S. N. Polyakov na na 1982 ọ dochie A. G. Rusakov
Ntọt ewu ewu na nke University n'etiti gaje ụmụ akwụkwọ, ngalaba na ụlọ akwụkwọ nke University-etinye mgbalị dị ukwuu na-ekesa ihe ọmụma banyere mahadum na Karelia ma agbata obi ebe. Ọzọkwa, a ọnụ ọgụgụ nke pụrụ iche ọzụzụ ọmụmụ (ew banyere 1,800 ndị mmadụ) a haziri. University nkụzi haziri nzukọ na elu ụmụ akwụkwọ ebe ha na-ekwu banyere ohere ụmụ akwụkwọ ga-enweta na mahadum. Na-akpọ “Open Door Days” A haziri mgbe nile. N'ihi ya, mpi maka nnabata eto banyere 2.3 ụmụ akwụkwọ kwa dị oghere.
Special anya ugwo mma nke larịị nke onye nkụzi nzere. Teachers ugbu a nwere ike ihe ndị ọzọ ezumike irite ukwu na doctoral (PhD) degrees. The mahadum nwere 40-50 gụsịrị akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ n'afọ ọ bụla.
Na 1970 uche pụrụ iche na e nwekwara akwụ ụgwọ ndị oru ngwá ọrụ nke mahadum. Eight klas onwem na-egosipụta fim na abụọ klas ghọrọ asụsụ laboratories. Computer klas na-kwalite na ọgbọ nke atọ kọmputa Njedebe-1022 na Njedebe-1035 na arụnyere.
PetrSU bụ otu n'ime ndị mbụ na mahadum na-emejuputa atumatu ihe integrated omume nke USSR Ministry of Higher Education akpọ “ICS-mahadum”. Ka iwelie mma na-arụ ọrụ nke mahadum, na mahadum na-eme nnyocha mepụtara a ọnụ ọgụgụ nke software usoro tinyere “Entrant”, “Number nke ụmụ akwụkwọ”, “nnọkọ”, “Ugbu akara”, “Social na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eme,” “ukpep-amụrụ,” “Control nke mkpebi mmejuputa”, na “Human Resources Staff”.
Site na mmalite afọ ndị 1970 ruo 1985, ihe dị ka 14300 ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na mahadum.
Ị chọrọ atụle Petrozavodsk State University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Petrozavodsk State University na Map
photos: Petrozavodsk State University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Petrozavodsk State University.